Guddoomiyaha Xisbiga UCID oo ka soo horjeestay hadal ka soo yeeray M/weyne Biixi… – Hagaag.com
Guddoomiyaha Xisbiga UCID oo ka soo horjeestay hadal ka soo yeeray M/weyne Biixi…
Posted on 22 Nofeembar 2018 by Admin in National // 0 Comments
Guddoomiyaha Xisbiga Mucaaridka Somaliland ee UCID Faysal Cali Waraabe ayaa ka soo horjeestey hadal ka soo yeeray Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi kaasoo uu ku sheegay in la joojiyay wada hadaladii Somaliland iyo Soomaaliya.
Guddoomiyaha Xisbiga UCID ayaa sheegay in Muuse Biixi uusan joojin karin wada hadalka Somaliland iyo Soomaaliya, waxaana uu sheegay in wada hadalo ay sii socon doonaan tan iyo inta labadda dal ay kala baxayaan.
Faysal ayaa ku tilmaamay in mowqifka Muuse Biixi inuu ahaa mid Caadifad ah, islamarkaana ay habboon tahay in Soomaaliya iyo Somaliland ay iskaashaddaan.
“Wadanka lagu wadimaayo caadifad ,haddaad dadka la tashan weydo waa lagaa tashanayaa Madaxweyne, wada hadaladuna go’aan qaran ayuu ahaaye mu ahayn mid qofeed, wuxuuna ku bilaabmay talo qaran oo golayaasha sharci dajintu ay ogolaadeen” ayuu yiri Faysal Cali Waraabe.
Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa Magaalada Burco dhowaan ka sheegay in guud ahaan Somaliland ay joojisay wada hadalladdii dowladda Dhexe ee Soomaaliya iyo Somaliland.
Sidoo kale toddobaadkii hore ayuu Feysal Cali Waraabe ku eedeeyay dowlada Soomaaliya inay ka goysay xiriirkii ay la lahaayeen dowlada Itoobiya.